MW CMC Oo Kulan Layeeshay Hormuudka Shaqaalihii Ladhaadhiciyay - Cakaara News
MW CMC Oo Kulan Layeeshay Hormuudka Shaqaalihii Ladhaadhiciyay
Jigjgia(Cakaaranews) Isniin, 25ka Juy 2016. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa saaka hoolka shirarka ee xarunta madaxtooyada kulan kulayeeshay hormuudka shaqaalihii dhawaan loo dhaadhiciyay degmooyinka ee gacantooda isku meeleeyay. Kuwaas oo tagay kuna sugnaa goobtoodii shaqo kahor inta aan hada loo yeedhin.
Hadaba madaxwaynaha oo bogaadiyay shaqaalahan maadaama oo ay kasoo dhalaaleen waajibaadkii loo idmaday ee u adeegida shacabka ee goob kasta ayaa usheegay inay xukuumadu ku abaal-marinayso magacaabis gacantaada isku-meelee ah oo isugu jirta degmooyinkii hore iyo kuwa cusub.
Shaqaalahan oo ubadnaa dumar uu heerkooda aqoontu isugu jiro Diploma iyo Degreega 1, aad ayaana gacantooda kuqaatay nasiibka degmooyinkii ay kashaqayn lahaayeen iyagoo aad ugu faraxsan islamarkaana kuqanacsan meel walba oo uu nasiibkoodu kuqoro.
Kadibna, madaxwaynaha ayaa usoo jeediyay in hadii ay jiraan shaqsiyaad aan tagi Karin ama kacudurdaaranaya goobta uu hada nasiibkoodu kuqoro ay kadoorbidi karaan inay shaqadoodii hore sii wataan.
Ugudanbayna, shaqaalahan ayaa aad ugu riyaaqay nidaamka gacantaada iskumeelee mar labaad balse magacaabis ah. Waxayna kamahadceliyeen abaal-marinta ay xukuumadu kudarajaysay iyagoo balanqaaday inay tagayaan goob kasta oo usoo baxday islamarkaana kasoo bixi doonaan xilka iyo waajibaadka saaran.